4th kuburitsa. Chiso cheVatikitivha Gunnar Staalesen naDeon Meyer | Zvazvino Zvinyorwa
Vanyori Deon Meyer naGunnar Staalesen.
Handei kune iyo chikamu chechina chimwe chinhu chakasiyana ne zvakapfuura. Ino nguva yatinayo vanyori vaviri vakasiyana kwazvo, Gunnar Staalesen naDeon Meyer. Vanogona kunge vasingazivikanwe neruzhinji, asi ivo vari vakakurumbira mhosva mhosva vanyori munyika dzavo, Norway neSouth Africa. Ivo vaviri vakagadzira mavara maviri, matikitivha ake ane mukurumbira, iyo, kana yaunzwa kukrini diki, yaive kumeso kumwe chete. Zvakaipisisa, kuti basa rake harina kusvika pano.
Isu tinotarisa Staalesen, Dean weNorway mhosva inoverengeka, musiki weakavanzika mutikitivha Varg veum. Kare Meyer, musiki wemapurisa wekutanga uyezvezve mutikitivha wega, Mat joubert. Akavapa zvese kumeso kwake nemuviri wake Mutambi weNorway Trond Espen Seim, inokodzera zvese zviri zviviri, kunyangwe paine kusiyana kwetsika nemagariro evatambi.
2.0.1 Mutambi. Trond Espen Seim
Akazvarirwa mukati Bergen muna 1947. Akadzidza philology yechiFrench neyeChirungu uye zvinyorwa paUniversity yeBergen. Akaburitsa bhuku rake rekutanga muna 1969 uye akagamuchira akasiyana akanyorwa mibairo.
Iye anozivikanwa neakabudirira nhevedzano ye 21 enganonyorwa nyeredzi Varg veum. Yenyaya idzodzo Gumi nemaviri acho akashandurwa ku cinema, nekubudirira kwakafanana nemabhuku. Pano, zvinosuruvarisa, chete izvozvo Iwo madenderedzwa erufu, izvo zvakare zvakaoma kuwana. Asi vaigona kuonekwa lIwo mafirimu matanhatu ekutanga makore mashoma apfuura muLa 6.
Iwo madenderedzwa erufu (Dodens drabanter). Varg Veum anogamuchira kufona inomurevera kune imwe nyaya yaakashanda paaiita muChirongwa Chekudzivirira Vana. Mwana makore maviri anga ave akaparadzaniswa naamai vake mumamiriro ezvinhu anosiririsa. Nguva pfupi yapfuura, mwana mumwe chete, Jan Egil, akaona kufa kwababa vake vekurera uye akatamisirwa nemhuri nyowani. Makore gumi gare gare, mudiki Jan Egil ari akapomerwa mhosva yekuponda kaviri iyo Varg Veum ichafanirwa kuongorora.
La bhaisikopo izvi. Kune avo vanoda kuvatarisa.
Maruva anovava (Bitter blomster) (2007)
Iyo yakanaka durmiente (Yakatendeuka(2007)
Kusvikira rufu rwatiparadzanisa (Din til døden(2008)
Ngirozi dzakadonha (falne-engler(2008)
Muviri mufiriji (Kvinnen uye kjøleskapet(2008)
Imbwa dzakavigwa hadzirume (begravde hunder(2008)
Skriften på veggen (Meseji iri kumadziro(2010)
Svarte kure (Nhema nhema(2011)
Dodens drabanter (Satellite kufa(2011)
I mørket er all ulver grå (Husiku mapere ese akachena(2011)
De døde har det godt (Vakafa vakanaka(2012)
Kalde hjerter (Mwoyo inotonhora(2012)
Meyer akaberekwa muna 1958, muPaarl. Akashanda semutori wenhau, munyori uye munyori wekugadzira mumakambani ekushambadzira. Neraki pano mamwe mabasa asvika yako, pamusoro peizvozvo Mumvuri wekare (1999), izvo zvakare zvakaoma kuwana.
Maawa gumi nematatu (2014) uye Dhiyabhorosi yepamusoro (2010) nyeredzi mumwe mutikitivha, Bennie griessel. Uye ivowo Ropa safari (2012) uye Mwoyo wemuvhimi (2009).
Shadows kubva kare. Kaputeni Mat joubert Arasikirwa nezvose: mukadzi wake, akaurawa noutsinye, tariro neramangwana. Kusasarudzwa uye kusava nehanya, doro uye kuzvinzwira tsitsi kuri kukurumidzisa kupunzika kwake. Asi mweni akateedzana emhondi inokatyamadza Cape Town, saka kugadzirisa nyaya inozove mukana we rudzikinuro rwemunhu.
Iyi inova yakagadziriswa uye ikaburitswa gore rapfuura nemusoro wekuti Cape Town se 6 episode miniseries. Yaive yeterevhizheni (chiteshi Calle 13) mune ChiGerman neSouth Africa co-kugadzirwa. Akaverenga pane iyo mvumo yemunyori zvese nekuda kwekuchinjika kwayo uye kwevakasarudzwa vakasarudzwa.
Kune chinotevera chinzvimbo naJoubert semunhu mukuru, trackers, kwaakasiya mapurisa uye ari mutikitivha wega. Asi kuti uzive kana ichasvika pano. Zvakafanana nezvakateedzana.
Mutambi. Trond Espen Seim
Akazvarwa muOslo muna 1971, iye ari mutambi anozivikanwa weNorway uye director wemitambo, firimu neterevhizheni. Kubudirira kubudirira kwake kukuru uye kwepasirese game Varg veum. Nekuda kweyakajairika muviri wake weViking, chero hunhu kubva kune izvo zvikamu zvekushongedza, asi kutandara kwake kune akaoma uye ane dutu muSouth Africa kwaive zvakare kubudirira. Mat joubert.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Zvazvino Zvinyorwa » Type » Nhema nhema » 4th kuburitsa. Chiso cheGunnar Staalesen naDeon Meyer matikitivha